Xidiga Arsenal & Liverpool Lala Xidhiidhinayo Ee Hakim Ziyech Oo La Ogaaday Kooxda & Xidiga Uu Taageeraha U Yahay. - Gool24.Net
Kooxaha Liverpool iyo Arsenal ayaa ku dagaalamaya saxiixa xidiga kooxda Ajax ee Hakim Ziyech oo wacdaro soo dhigay xili ciyaareedkan.
Hakim Ziyech oo 26 sano jir ah ayaa wacdaro layaableh ka soo dhigay kooxdiisa Ajax oo xili ciyaareedkan ku soo guulaysatay koobabkii maxaliga ahaa ee Netherlands isla markaana aduunka kaga yaabsatay wixii ay Champions League ka samaysay.
Agaasimaha kooxda Ajax ee Marc Overmars ayaa si rasmi ah u shaaciyay in Hakim Ziyech uu xagaagan ka bixi karo kooxdiisa iyada oo heshiiskiisa lagu burburin karo 25 milyan gini oo kaliya.
Marka la eego qiimaha lagu iibsan karo Hakim Ziyech iyo waliba heerka xirfadiisa ciyaareed gaadhsiisan tahay waxa loo arkaa in uu yahay sidii ciyaartoy bilaash lagu helay oo kale waxaana si wayn u doonaya kooxaha Liverpool iyo Arsenal.
Laakiin waxaa la ogaaday in Hakim Ziyech uu taageere u yahay kooxda Arsenal isla markaana uu Mesut Ozil yahay ciyaaroyga uu ku daydo ee geesigiisa u ah taas oo Gunners siin karta fursada ay 26 sano jirkan ugula soo wareegi karaan.
Hakim Ziyech ayaa xili ciyaareedkan 21 gool u soo dhaliyay Ajax wuxuuna sameeyay 24 gool caawin kadib markii uu saftay 49 kulan taas oo la micno ah in 45 gool uu ku soo lug yeeshay 49 kulan taas oo ah xog layaableh.
In Liverpool iyo Arsenal ay 25 milyan gini ku heli karaan Hakim Ziyech oo 45 gool gool ku soo lug yeeshay ayaa ah mid ayna inta badan suurtogal ka ahayn suuqa kala iibsiga waqti xaadirkan.
Laakiin haddii ay Arsenal ku fashilanto finalka Europa league oo ay u soo bixi waydo Champions League, waxay taasi fursad wayn u noqon kartaa Liverpool oo Hakim Ziyech kaga guulaysan karta.
Markii Hakim Ziyech la waydiiyay in uu jiro ciyaartoy uu si khaas ah ugu daydo oo taageero waxa uu ku jawaabay: ” Haa, xaqiiqdii mid ayaan leeyahay waa Ozil”.
Maxay Tahay Sababta Ay Ajax Qiimaha Hoose Ugu Fasaxayso Hakim Ziyech?
Agaasimaha kooxda Ajax ee Marc Overmars ayaa cadeeyay in ay jirtay balan hore oo ay Hakim Ziyech ula galeen in loo ogolaan doono in uu kooxda ka baxo xagaagan isla markaana waxa uu xaqiijiyay in kooxo badan oo Yurub ahi ay doonayaan.
Sidaa daraadeed, balan hore oo ay maamulka Ajax la galeen Hakim Ziyech ayaa u damaanad qaaday in uu xagaagan kooxda kaga bixi karo qiimo ka hooseeya intii uu suuqa kala iibsiga ka joogay.
Si kastaba ha ahaatee, Liverpool iyo Arsenal ayaan ahayn labada kooxood ee kaliya ee doonaya saxiixa Hakim Ziyech waxaana jira kooxo badan oo xiisaynaya in ay la wareegaan.